IELTS ဟာ “အပွညျပွညျဆိုငျရာ အင်ျဂလိပျဘာသာစကားစဈဆေးမှုစနဈ” ရဲ့အတိုကောကျဖွဈပါတယျ။ ကမ်ဘာပျေါမှာ လူသိအမြားဆုံးနဲ့ ဂုဏျသိက်ခာအရှိဆုံး အင်ျဂလိပျဘာသာစကားကြှမျးကငျြတတျမွောကျမှု စဈဆေးခကျြတဈခုဖွဈပါတယျ။ IELTS ဟာ လလေ့ာသငျယူသူတှရေဲ့အရေး၊ အဖတျ၊ အပွော၊ အကွားဆိုတဲ့ စှမျးရညျ၎မြိုးစလုံးကို အကဲဖွတျသုံးသပျပေးပါတယျ။ IELTS နောကျဆုံးရမှတျဟာ စဈဆေးမှုခံယူသူအနနေဲ့ အင်ျဂလိပျဘာသာစကားကို လကျတှဘေ့ဝမှာ ဘယျလောကျအထိကြှမျးကငျြစှာအသုံးပွုနိုငျမယျဆိုတာကို ထငျဟပျနတေဲ့အခကျြပဲဖွဈပါတယျ။
>>> 1/9 အမှတျရသူဆိုရငျ ထိုလူဟာ ဘာသာစကားကို လုံးဝအသုံးမပွုနိုငျသူ။ စကားလုံးအနညျးငယျကလှဲပွီး အသုံးပွုနိုငျစှမျးမရှိတဲ့သူ လို့အဆငျ့သတျမှတျပါတယျ။
>>> 2/9 မှတျရသူကတော့ ပုံမှနျအသုံးမပွုနိုငျသူ။ အင်ျဂလိပျဘာသာစကား အပွောနှငျ့ အရေးတို့ကို နားလညျနိုငျရနျအခကျအခဲရှိသူအဖွဈသတျမှတျကွပါတယျ။
>>> 3/9 မှတျရရှိသူကတော့ ထမငျးစားရသေောကျပွောနိုငျပမေယျ့ ရငျးနှီးတဲ့အခွအေနမြေိုးမြားတှငျ ယဘေုယလြောကျသာ ပွောနိုငျ၊ ဆိုနိုငျ၊ နားလညျနိုငျတဲ့သူတှလေို့သတျမှတျကွပါတယျ။
>>> 4/9 မှတျဆိုရငျတော့ အကနျ့အသတျနဲ့သာ အင်ျဂလိပျစကားကို ပွောဆိုနိုငျတဲ့သူတှဖွေဈပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ တဈဖကျကပွောသော အဓိပ်ပာယျကို နားလညျဖို့နဲ့ မိမိပွောလိုတဲ့ အကွောငျးအရာကို ထုတျဖျောပွောပွဖို့အတှကျ အခကျအခဲတှရှေိကွပါတယျ။
>>> 5/9 အမှတျရရှိသူတှကေတော့ အင်ျဂလိပျစာကို အသငျ့အတငျ့အသုံးပွုနိုငျကွသူမြားဖွဈပါတယျ။ အခွအေနအေမြားစုမှာ သကျဆိုငျရာစကားလုံးထဲက တဈစိတျတဈပိုငျးကို အသုံးပွုပွောဆိုနိုငျပွီး ယဘေုယအြဓိပ်ပာယျကိုတော့ နားလညျနိုငျတဲ့သူတှပေါ။ ဒါပမေယျ့ အမှားတှအေမြားကွီး ဖွဈစတေဲ့ အဆငျ့ဖွဈပါတယျ။
>>> 6/9 မှတျသမားတှကေတော့ အခွခံလိုအပျခကျြတှကေို ပွညျ့မီတဲ့သူတှပေါ။ မတိကမြှု၊ လှဲမှားမှုနဲ့ နားလညျမှုလှဲမှားမှုတှေ ရှိပမေယျ့လညျး ဘာသာစကားကို ထိထိရောကျရောကျအသုံးပွုနိုငျစှမျးရှိကွပါတယျ။ ရှုပျထှေးတဲ့စကားအသုံးအနှုနျးတှကေိုလညျး အသငျ့အတငျ့နားလညျသူတှဖွေဈကွပါတယျ။
>>> 7/9 မှတျရရှိသူတှကေတော့ အင်ျဂလိပျစာကို ကောငျးကောငျးအသုံးပွုနိုငျသူတှဖွေဈပါတယျ။ ရံဖနျရံခါအခွအေနတှေမှောတော့ မတိကတြဲ့ အသုံးအနှုနျးလှဲမှားမှု၊ နားလညျမှုလှဲမှားမှုတှရှေိနိုငျပမေယျ့ ဘာသာစကားကို လကျတှအေ့လုပျဖွဈအောငျအသုံးပွုပွောဆိုနိုငျတဲ့ အဆငျ့လို့သတျမှတျကွပါတယျ။
>>> 8/9 သမားကတော့ အင်ျဂလိပျစာကို အလှနျကောငျးမှနျစှာအသုံးပွုနိုငျတဲ့သူဖွဈပွီး ဘာသာစကားကို အပွညျ့အဝအသုံးပွုနိုငျတဲ့ အဆငျ့သတျမှတျခကျြဖွဈပါတယျ.
>>> 9/9 အမှတျရရှိသူကတော့ လုံးဝကြှမျးကငျြတဲ့အသုံးပွုသူတှဖွေဈပါတယျ။ အင်ျဂလိပျဘာသာစကားကို တိကစြှာပွောနိုငျဆိုနိုငျပွီး လှဲမှားမှုတှမေရှိတဲ့ အကောငျးဆုံးအသုံးပွုနိုငျသူအဆငျ့သတျမှတျခကျြရရှိသူတဈဦးလညျးဖွဈပါတယျ။
ဒါတှကေတော့ IELTS အဆငျ့သတျမှတျခကျြတှဖွေဈပါတယျ။ IELTS က ကမ်ဘာကအသိအမှတျပွုထားတဲ့ အင်ျဂလိပျစာစဈဆေးခွငျးမြိုးဖွဈတဲ့ အတှကျ ကမ်ဘာတဈဝနျးလုံးက တံခါးတှကေိုဖှငျ့နိုငျမယျ့သော့ခကျြတဈခုဖွဈပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ လူတိုငျး IELTS လလေ့ာထားသငျ့တယျနျော။
IELTS သငျသောဆရာမြားကို www.sayar.com.mm ရဲ့ >>> https://bit.ly/3nLNUJQ <<< ဒီ link ကနတေဈဆငျ့ အခုပဲရှာဖှလေိုကျပါ။
IELTS ရမှတ်အပေါ် မူတည်၍ အဆင့်သတ်မှတ်ချက်များ
IELTS ဟာ “အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားစစ်ဆေးမှုစနစ်” ရဲ့အတိုကောက်ဖြစ်ပါတယ်။ ကမ္ဘာပေါ်မှာ လူသိအများဆုံးနဲ့ ဂုဏ်သိက္ခာအရှိဆုံး အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားကျွမ်းကျင်တတ်မြောက်မှု စစ်ဆေးချက်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ IELTS ဟာ လေ့လာသင်ယူသူတွေရဲ့အရေး၊ အဖတ်၊ အပြော၊ အကြားဆိုတဲ့ စွမ်းရည်၎မျိုးစလုံးကို အကဲဖြတ်သုံးသပ်ပေးပါတယ်။ IELTS နောက်ဆုံးရမှတ်ဟာ စစ်ဆေးမှုခံယူသူအနေနဲ့ အင်္ဂလိပ်သာစကားကို လက်တွေ့ဘဝမှာ ဘယ်လောက်အထိကျွမ်းကျင်စွာအသုံးပြုနိုင်မယ်ဆိုတာကို ထင်ဟပ်နေတဲ့အချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။
>>> 1/9 အမှတ်ရသူဆိုရင် ထိုလူဟာ ဘာသာစကားကို လုံးဝအသုံးမပြုနိုင်သူ။ စကားလုံးအနည်းငယ်ကလွဲပြီး အသုံးပြုနိုင်စွမ်းမရှိတဲ့သူ လို့အဆင့်သတ်မှတ်ပါတယ်။
>>> 2/9 မှတ်ရသူကတော့ ပုံမှန်အသုံးမပြုနိုင်သူ။ အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကား အပြောနှင့် အရေးတို့ကို နားလည်နိုင်ရန်အခက်အခဲရှိသူအဖြစ်သတ်မှတ်ကြပါတယ်။
>>> 3/9 မှတ်ရရှိသူကတော့ ထမင်းစားရေသောက်ပြောနိုင်ပေမယ့် ရင်းနှီးတဲ့အခြေအနေမျိုးများတွင် ယေဘုယျလောက်သာ ပြောနိုင်၊ ဆိုနိုင်၊ နားလည်နိုင်တဲ့သူတွေလို့သတ်မှတ်ကြပါတယ်။
>>> 4/9 မှတ်ဆိုရင်တော့ အကန့်အသတ်နဲ့သာ အင်္ဂလိပ်စကားကို ပြောဆိုနိုင်တဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် တစ်ဖက်ကပြောသော အဓိပ္ပာယ်ကို နားလည်ဖို့နဲ့ မိမိပြောလိုတဲ့ အကြောင်းအရာကို ထုတ်ဖော်ပြောပြဖို့အတွက် အခက်အခဲတွေရှိကြပါတယ်။
>>> 5/9 အမှတ်ရရှိသူတွေကတော့ အင်္ဂလိပ်စာကို အသင့်အတင့်အသုံးပြုနိုင်ကြသူများဖြစ်ပါတယ်။ အခြေအနေအများစုမှာ သက်ဆိုင်ရာစကားလုံးထဲက တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကို အသုံးပြုပြောဆိုနိုင်ပြီး ယေဘုယျအဓိပ္ပာယ်ကိုတော့ နားလည်နိုင်တဲ့သူတွေပါ။ ဒါပေမယ့် အမှားတွေအများကြီး ဖြစ်စေတဲ့ အဆင့်ဖြစ်ပါတယ်။
>>> 6/9 မှတ်သမားတွေကတော့ အခြခံလိုအပ်ချက်တွေကို ပြည့်မီတဲ့သူတွေပါ။ မတိကျမှု၊ လွဲမှားမှုနဲ့ နားလည်မှုလွဲမှားမှုတွေ ရှိပေမယ့်လည်း ဘာသာစကားကို ထိထိရောက်ရောက်အသုံးပြုနိုင်စွမ်းရှိကြပါတယ်။ ရှုပ်ထွေးတဲ့စကားအသုံးအနှုန်းတွေကိုလည်း အသင့်အတင့်နားလည်သူတွေဖြစ်ကြပါတယ်။
>>> 7/9 မှတ်ရရှိသူတွေကတော့ အင်္ဂလိပ်စာကို ကောင်းကောင်းအသုံးပြုနိုင်သူတွေဖြစ်ပါတယ်။ ရံဖန်ရံခါအခြေအနေတွေမှာတော့ မတိကျတဲ့ အသုံးအနှုန်းလွဲမှားမှု၊ နားလည်မှုလွဲမှားမှုတွေရှိနိုင်ပေမယ့် ဘာသာစကားကို လက်တွေ့အလုပ်ဖြစ်အောင်အသုံးပြုပြောဆိုနိုင်တဲ့ အဆင့်လို့သတ်မှတ်ကြပါတယ်။
>>> 8/9 သမားကတော့ အင်္ဂလိပ်စာကို အလွန်ကောင်းမွန်စွာအသုံးပြုနိုင်တဲ့သူဖြစ်ပြီး ဘာသာစကားကို အပြည့်အဝအသုံးပြုနိုင်တဲ့ အဆင့်သတ်မှတ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်.
>>> 9/9 အမှတ်ရရှိသူကတော့ လုံးဝကျွမ်းကျင်တဲ့အသုံးပြုသူတွေဖြစ်ပါတယ်။ အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားကို တိကျစွာပြောနိုင်ဆိုနိုင်ပြီး လွဲမှားမှုတွေမရှိတဲ့ အကောင်းဆုံးအသုံးပြုနိုင်သူအဆင့်သတ်မှတ်ချက်ရရှိသူတစ်ဦးလည်းဖြစ်ပါတယ်။
ဒါတွေကတော့ IELTS အဆင့်သတ်မှတ်ချက်တွေဖြစ်ပါတယ်။ IELTS က ကမ္ဘာကအသိအမှတ်ပြုထားတဲ့ အင်္ဂလိပ်စာစစ်ဆေးခြင်းမျိုးဖြစ်တဲ့ အတွက် ကမ္ဘာတစ်ဝန်းလုံးက တံခါးတွေကိုဖွင့်နိုင်မယ့်သော့ချက်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် လူတိုင်း IELTS လေ့လာထားသင့်တယ်နော်။
IELTS သင်သောဆရာများကို www.sayar.com.mm ရဲ့ >>> https://bit.ly/3nLNUJQ <<< ဒီ link ကနေတစ်ဆင့် အခုပဲရှာဖွေလိုက်ပါ။
Read times Last modified on Saturday, 16 January 2021 11:12